बीमा समितिले तयार पार्यो बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक भिडियो, ‘अभिकर्ता पेशालाई उच्च सम्मान’ – Insurance Khabar
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार १३:३५
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक भिडियो तयार पारेको छ । कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य सहितका कलाकारले अभिनय गरेको यो भिडियो लगभग दुई मिनेटको छ । समितिले यस वर्ष बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अगाडी बढाएको छ ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु सँग बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरिरहेको समितिले आज उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेको हो । भिडियोमा विवाहमा केटी हेर्ने जादा केटीको प्रमुख कार्य अभिकर्ता रहेको प्रसंङ्गलाई जोडेर जीवन बीमा र निर्जीवन बीमालाई बुझाउन खोजिएको छ ।
यस भिडियो मार्फत नेपाली समाजमा अभिकर्तालाई पनि एउटा प्रमुख पेशाको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ । नेपाली समाजमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, बैंकर, बीमक, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई मात्रै उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ । तर कलाकार द्धय हरिवंश र मदनकृष्णलेले अभिकर्तालाई पनि प्रमुख पेशाको रुपमा चिनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन् ।
यस्तो छ भिडियोमा प्रयोग गरिएका शब्दहरु
केटाको बुबा मदनकृष्ण श्रेष्ठ हुन्छन् । तर उनलाई लमि हरि‍वंश आचार्य केटीको बुबा भन्ने थाहा हुँदैन । उनकी छोरीको प्रमुख पेशा भने बीमा अभिकर्ता हुन्छ ।
मदनकृष्णः लमि जी केटी हामीलाई एकदम मन पर्यो कुरा चलाए हुन्छ ।
(लमि) हरिवंश उसो भए घरमै गएर कन्या एक पटक हेरौ है ।
मदनकृष्णः ल ल
मदन कृष्णः काम चाँही के गर्छौ नानी तिमि ?
केटीः म बीमा अभिकर्ता हुँ ।
मदनकृष्णः यो बीमा गरेर के के फाइदा हुन्छ ?
लमि हरिवंशः म सुनाउछु,
हरिवंशले आफ्नो मोबाइल रेकर्डर अन गरेर…..
बीमा मुलत दुई किसिमका हुन्छन् । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा । जीवन बीमा गरेपछि बीमाको अवधि समाप्त भए पछि आफुले जम्मा गरेको रकम बोनस सहित सर्लक्कै पाइन्छ । कथम कदाचित बीमाकर्ताको मृत्यु भएमा निजको नजिकैको हकवालाले बीमाको रकम पाउदछ ।
निर्जीवन बीमाः बीमा कर्ताको भौतिक सम्पत्ती र स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित हुन्छ । सवारीसाधन घर व्यापार पशुपन्छि र अरु भौतिक सम्पत्ती भुकम्पन बाढी पहिरो आधिवेहरी आगलागी चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोप दुर्घटना वा अरु कारणले क्षति हुन गएमा दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपुर्ती प्रदान गर्दछ ।
मदनकृष्णः यो त तपाईकै श्वर जस्तो लाग्यो त ।
हरिवंशः यो कन्यालाई बीमा गरेर के फाइदा हुन्छ भनेर मान्छेले सोध्छन् । उसलाई जवाफ दिदा दिदा हैरान हुन्छ भनेर । अनि मैले भरेर बजाइदिहाल्छु ।
केटाः बुबा मलाई उहाँ मन पर्यो
हरिवंशः इसाराले मन पर्यो,
केटीः सांकेतिक रुपमा….मन पर्यो
हरिवंशः म लड्डु लिएर आउछु
(मदनकृष्णले भित्ताको फोटोमा हरिवंश सहित केटिको फोटो देखेपछि)
मदनकृष्णः यो तश्विर त लमी जीकै होइनर भन्या ।
हरिवंसः उ उस्को ममि जी, म उस्को श्रीमान जी । अनि आफ्नो छोरीको लागि आफै बर खोजेको । योग्य बर ।
(लड्डु दिदै ल खानुन न)
मदनकृष्णः सम्बधिनी ज्यू म पनि जीवन र निर्जीवन बीमा गर्छु
सम्धिनीः गर्नु पर्यो नि सम्धि ज्यू